Social Commerce inoitika muecommerce mu2020 | ECommerce nhau
Kuzivikanwa kukuru uye pesvedzero yemagariro enhau zvakagadzira mukana mukuru wevateereri kuti vatenge kuburikidza nemapuratifomu enharaunda. Vashandisi veInternet pasi rose vakashandisa avhareji yemaminetsi gumi nemana nemana pazuva pasocial media muna 142, kubva pamaminetsi makumi mapfumbamwe muna2018, sekureva kweGlobalWebIndex mushumo wakataurwa neDigital Information World.
Chimwe chezviitiko zvikuru muaya midhiya ndezve izvo zvinonzi seSocial Commerce, maitiro mune ecommerce mu2020. Mukati meizvi, hapana mubvunzo kuti huchenjeri hwebhizinesi chikamu chinoshanda kwazvo. Izvi zvakaita kuti pasocial media ive nesimba rakakura pakutenga kwevatengi maitiro, ne36% yevashandisi veInternet veUS vachiti nhepfenyuro yezvemagariro yave yakakosha semamwe manyuko eruzivo.Sarudzo yechigadzirwa, kubva pa27% muna2015, sekureva kweGfK ongororo yakataurwa neMarketer.
Sezvo simba renhau rezvemagariro richikura, zvekushambadzira zvemagariro zviri kuramba zvichikosha chiteshi mukutenga pamhepo. Vatengi vakashandisa vezvenhau kudzidza nezve zvigadzirwa uye zvigadzirwa uye vawane kurudziro kweanopfuura makore gumi; izwi rekuti "social commerce" rakaunzwa ne Yahoo! muna 2005.
1 Social Commerce, kukosha kwayo kukuru muecommerce
2 Kukura uye kusvika kwevatengi vatsva
3 Kuenderera mberi kwekuwedzera kwesocial commerce
4 Simba rekushambadzira richaramba richinyengerera
5 Kukura kwemasevhisi mameseji ega
6 Zvemagariro midhiya mapuratifomu
7 Kubatanidzwa kwekutenga nzira
Social Commerce, kukosha kwayo kukuru muecommerce
Zvisinei, mumakore achangopfuura, mapuratifomu anga achishanda kubvisa kukakavara kwekutenga chigadzirwa kumwe kunhu mushure mekuzviwana pasocial media, achiwedzera mabhatani ekutenga uye zvikwama zvemadhijitari, semuenzaniso, kuitira kuti vashandisi vatenge.
MuSocial Commerce Report, Bhizinesi Insider Intelligence inofungidzira saizi iripo yemusika wekutengeserana, inofungidzira kukura kwayo mune ramangwana, uye inoongorora kuti nei kukura kwayo kwakamira kusvika pari zvino, uye kuti nei zvichizoshanduka. Isuwo tinotarisa kune ezvokutengeserana zvekutengeserana zvinopihwa zvemapuratifomu makuru enhau uye kuongorora ramangwana rekambani imwe neimwe munzvimbo.
Kukura uye kusvika kwevatengi vatsva
Mune ino mamiriro akapararira, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kukura mukutorwa kwenzvimbo dzekutengeserana kwakamira mumakore achangopfuura nekuda kwekunetsekana nezve kuchengetedzeka uye kuvimbika kweiyo canal.
Asi kugamuchirwa uye kushandiswa zvakagadzirira kuwedzera nekuda kwekuzivikanwa kwemagariro enhau, simba rayo, uye nekuvandudza kugona kwebhizimusi yenzvimbo dzekudyidzana.
Mapuratifomu makuru anosanganisira Instagram, Facebook, Pinterest, uye Snapchat vakavandudza zvitoro zvavo zvekutenga netarisiro yekuve hubs sekutengeserana kwenzanga.
Chero nzira, kukosha kweiyo US yekutengesa yemusika musika inofungidzirwa kwemakore mashanu anotevera. Kwavari zvakafanira kuita zvinotevera zviito zvatiri kuzonyora kubva zvino zvichienda mberi:
Wongorora zvipingamupinyi uye kukura kwevanotyaira kusvika pakubvumidzwa uye kushandiswa kwesocial commerce.
Vhara izvo zvekutengeserana zviri kuunzwa ne Instagram, Facebook, Pinterest, uye Snapchat uye kurukurai kwavo akasiyana nzira, simba, uye kushaya simba.
Wongorora makambani ane kutora chikamu kwakasiyana mukutengeserana kwevanhu, kusanganisira misika uye mapuratifomu ekubhadhara anoshandisa maturusi eruzhinji uye kuti anokwana sei mumusika wezvekutengeserana.
Iwe uri kunyatsofarira kuziva kuti nei Social Commerce iri tsika mune ecommerce mu2020?
Kuenderera mberi kwekuwedzera kwesocial commerce
Mabhiza ari kukwidziridza ruzivo rwavo rwemadhijitari munzira dzakawanda, senge pasocial media uye e-commerce, vari kugadzira mukana wakakwikwidza wakasimba. Izvi zvichiri izvo, ne55% yevatengi vepamhepo vari kutenga kuburikidza nesocial media chiteshi, senge Facebook, Instagram, kana Pinterest muna 2018.
Pane zviratidzo zvakajeka zvekuti kutengeserana kwevanhu kucharamba kuchikura. Iyo North America e-commerce agency Absolunet yakaratidza zvinotevera kiyi nhamba.
87% yevatengesi veecommerce vanotenda kuti vezvenhau vanovabatsira kuita sarudzo yekutenga.
1 mu4 varidzi vemabhizimusi vari kutengesa kuburikidza neFacebook.
40% yevatengesi vanoshandisa vezvenhau kugadzira kugadzira.
30% yevatengi vanoti vanozotenga chaiko kuburikidza nevezvenhau mapuratifomu.
Chero zvazviri, isu tinofanirwa kuratidza matatu makuru maitiro mune zvekushambadzira zvemagariro:
Nharembozha - Masocial media masaiti ave mazhinji mafoni, uye vashandisi vanotarisira chiitiko chinovatendera kuti vatarise nekutenga pamafoni avo.
Kutaridzika - Mhando dzinotsvaga kuita chinongedzo pasocial media dzinofanirwa kukumbira maitiro e "kusagadzikana" uye kutungamirwa zvinotaridzika, zvine mukurumbira uye zvechokwadi.
Kuvimba - Zvikwereti zvinotarisa kupinda mune zvekushambadzira zvemunharaunda zvinofanirwa kutsvaga nzira dzekuvaka kuvimba uye kugadzira ruzivo rwepamhepo runoratidza kukosha kwakachena mukubhurawuza nekutenga online.
Nepo maitiro aya achiri kushanda, ini ndaida kunyatso tarisa kumatunhu mashanu chaiwo enharaunda yekutengeserana ayo mabrands anofanirwa kutarisisa nekutarisa sechikamu chavo chekuenda-kumusika zvirongwa mu2020.
Kuwedzera mune zvakadzika midzi e-commerce mapurojekiti
Sezvo bhizimusi rezvemagariro richiri kuenderera richimhanya, mamwe emapuratifomu akasimbiswa ari kutsvaga nzira dzekuvandudza yavo e-commerce kugona. Instagram uye Snapchat ingori mienzaniso miviri yemapuratifomu anoshanda pane akavakirwa-mukati e-commerce mapurojekiti, achitarisira kufambirana nekucheka-kumucheto social commerce mapurogiramu.
Muna Kurume, Instagram yakaparura nyowani ecommerce yekubhadharisa ficha kugadzirisa dambudziko riri kuenderera rekuendesa kumagumo-kumagumo mu-app ecommerce ruzivo kune vashandisi. Instagram Checkout inobvumira vashandisi ve Instagram kupedzisa kutenga zvigadzirwa vasina kusiya iyo app, uye mukuita chengetedza iyo ruzivo rwekutenga kune ramangwana kubhadhara.
Zvekutengeserana zvemagariro zvichawedzera kupfuura zvakagadziriswa makwara
Sezvo zvemagariro enhau zvichiramba zvichichinja, saizvozvo nhamba uye huwandu hwemapuratifomu ayo vanhu vanozobatana nawo. Kunyangwe kana vatsva vanopinda vangangodaro vasina kumbobvira vafambisa e-commerce mapuratifomu senge iyo Instagram uye Snapchat yataurwa pamusoro, vatengi vacharamba vachitarisira kuzokwanisa kuona nekutenga zvigadzirwa mukati medzimbo dzavanoshandisa nguva yavo.
Ipfupi vhidhiyo app TikTok yatanga kuyedza neyekutengeserana. Sekureva kweTechCrunch, TikTok yatanga kubvumidza vamwe vashandisi kuwedzera zvinongedzo kue-commerce saiti (kana chero imwe nzvimbo yekuenda) kune yavo nhoroondo bio, pamwe nekupa vagadziri kugona kutumira zviri nyore avo vanoona kumawebhusaiti ekutenga.
Iyi TikTok inofamba inoonekwa seinonyanya kukosha nekuti ichapa mhando mukana wekusvika kune vadiki veGen Z vateereri, izvo zvinoumba chikamu chakakura chevashandisi vevashandisi vepasi rese mazana mashanu emamiriyoni.
Simba rekushambadzira richaramba richinyengerera
Mabhizimusi ari kutsvaga kubudirira mune zvekushambadzira zvemunharaunda anofanirwa kutsvaga kuwedzera hukama hutsva uye / kana huripo nevanosimudzira kuvandudza kusvika, kubatana, uye kudyidzana nemhando dzavo.
Dambudziko rekumira kunze kwenzvimbo dzekudyidzana ihondo inogara iripo yekutarisisa kwevatengi uye mabrands anofanirwa kutsvaga nzira nyowani dzakasiyana dzekusimudzira kuziva. Sekureva kweGlobalWebIndex, vangangoita chikamu cheshanu chevashandisi veInternet vanoti vanoshandisa vezvenhau kutevedzera vanhu vanozivikanwa, vanosvika kota yeGen Zers kwavanonyanya kushanda.
Kuzivikanwa kwevanofurira kunoreva kuti 14% yevatengi veadhijitari vanoziva nezve matsva matsva kuburikidza nemvumo kubva kune vane mukurumbira, uye imwe 14% kuburikidza nemablog mablog anozivikanwa nevanhukadzi kana vakadzi.chigadzirwa ongororo, iri pamusoro peimwe nzira dzekutsvaga dzakadai sefirimu, redhiyo, uye mapepanhau.
Tora mukana weakanakisa ekuona uye vhidhiyo zvemukati
Kuwedzera kwekushambadzira kwevanhu kwakatungamirwa muchidimbu nevatengi vadiki (Gen Z uye Millennials kunyanya) kutsvaga nzira nyowani, dzinonakidza, uye dziri nyore dzekutarisa nekutenga online.
Sekureva kweMarketer, vanopfuura makumi mashanu neshanu muzana evashandisi veinternet veGen Z Z - vanoita hafu yefashoni yavo yekutenga online - vakati kwavo kwazvino fashoni kutenga vakafemerwa nekubvunzurudzwa kwenhau. Zvemagariro. Uye angangoita mamirioni mazhinji akataura zvakafanana:
Fashoni kutenga inofemerwa nevezvenhau
Uye aya madiki huwandu hwevanhu ari kutyairawo kudiwa kwefuma, yakawanda yekuona yezvinyorwa, kusanganisira vhidhiyo. Sekureva kwe2018 IAB Vhidhiyo Kushambadzira Yekushandisa kudzidza, ese misika zvikamu zvaona kuwedzera kwekudyara mune yedhijitari uye nharembozha kushambadzira. Kubva 2016, yakazara vhidhiyo kushambadzira mari yakawedzera ne53% uye inogona kuramba ichikwira.
Kukura kwemasevhisi mameseji ega
Mu2019, eMarketer inotarisira vanhu zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemaviri pasi rose, kana 2.52% yevashandisi vema smartphone, kushandisa nhare mbozha app kanenge kamwe pamwedzi:
Nharembozha mameseji kunyorera kutenderera pasirese. Uku kukura mukushandiswa kwemeseji maapplication, ayo anosanganisira Snapchat, WhatsApp, uye Facebook Messenger (iyo yekupedzisira iri yeFacebook), inogona kuwedzera kukanganisa mashandisiro anoita vatengi nemhando dzemhando yepamusoro munzvimbo yemafoni.
Izvo zvakajairwa zvekutumira mameseji maapplication uye shanduko yemabhizinesi maturusi (senge Messenger ad templates uye iro rebhizimusi katarogu paFacebook Messenger neWhatsApp, zvichiteerana) zvinoratidza kuti ichi chingave chinhu chakakosha kutarisisa nzvimbo muna 2020. Muchokwadi, iyo WhatsApp Bhizinesi Catalog iri chiitiko chinonakidza, sezvo chisingazongobatsira vashandisi kubatana nemakambani akakodzera, asiwo kuvabvumidza kuti vaone zviripo kubva kumakambani vasina kusiya chikuva.
Sezvo zvemagariro enhau zvinoramba zvichikura uye zvichichinja, zvemagariro zvekutengeserana zvichatevera, zvichipa vatengi dzimwe nzira uye nzira dzekutarisa nekutenga mukati memakosi akasiyana enharaunda. Nepo mapuratifomu akakurisa akagadzirisa zvavo zvekushambadzira zvemunharaunda, vatsva vanopinda seTikTok vari kutanga kuyedza uye kuyedza, vachisvika nhamba iri kukura yevatengi vadiki vari kutama kure nevatungamiriri varipo.
Mhando dzinotarisa kuti dziongorore zvekutengeserana mumwedzi gumi nemiviri inotevera dzinofanira kutarisa kuyedza nekudzidza dzichishandisa mapuratifomu akasiyana, asi zvakare rangarira kutarisa kupfuura kungoisa 'tenga' mabhatani. Sekureva kweGlobalWebIndex, vatengi vari kuwedzera kushandisa nzira dzakawanda pavanotenga online, uye nekudaro nzira dzezvemagariro dzinofanirwa kushandiswa pamwe chete, uye nekuwedzera kune, dzimwe nzira dzekutengesa kuti dzipe ruzivo rwevatengi zvinowirirana pamatanho ese erwendo rwekutenga.
Zvemagariro midhiya mapuratifomu
Zvemagariro midhiya mapuratifomu ane simba rakakura, nekugara kuchinjika tekinoroji, mihoro shanduko, uye maficha ekufambira mberi ari kuitwa kuti ape huchenjeri uye hukuru ruzivo rwevatengi. Saizvozvo, zvinodiwa nevatengi zvinogara zvichichinja uye zvisingachinjiki, zvichiita kuti zviomere mapuratifomu enhau uye mabhizinesi kusangana nazvo. Vatengi vari kutsvaga imwe-yekumira shopu kwavanogona kusangana yavo yekuvhura uye yekutenga zvido.
Uye zvemabhizimusi zvemabhizimusi zvakabuda senzira yekurwisa kusangana nezvinodiwa nevatengi kuburikidza nekubatanidzwa kwezviitiko zvekutenga nevezvenhau kufambisa.
Zvemabhizimusi zvemabhizimusi ndiko kubatanidzwa kwekutenga pamhepo uye kubhucha pasocial pasocial network senge Instagram, Facebook, YouTube uye Pinterest zvinoshandiswa senzira yekusimudzira nekutengesa zvigadzirwa uye zvinopihwa zvekambani.
Zvemabhizimusi zvekutengesa chinhu chakakosha kwazvo munyika yanhasi sezvo ichipfupisa rwendo rwevatengi kunotsvaga, kutsvaga, kuenzanisa, kuongorora uye kutenga chigadzirwa kubva pamapeji akasiyana ewebhu nemawebhusaiti. Uye inoshandura poindi yekurudziro kuita poindi yekutengesa, ichibvumira vashandisi kuti vatenge iyo munguva chaiyo neinowoneka yekudzvanya kuburikidza nesocial network.
Kubatsira kukuru kwekushambadzira kwevanhu ndekwekuti inogadzirisa nyaya dzekukwirisa mitengo, shanduko dzakadzika, kusiyiwa kwengoro, uye kuita kwakaderera uko mabhizinesi anotarisana nako kudhijitari. Izvo zvave kunzi 30% yevashandisi venhau vevashandisi, ndiko kuti mamirioni mazana mashanu evashandisi pazuva, vanoda kutenga zvigadzirwa zvakananga kubva pasocial platform. Uye ichi chiratidzo chekuti nei kushambadzira kwevanhu kwakakosha pakutengesa pamhepo.
Isu takanyora zvimwe zvemagariro zvemabhizimusi maitiro iwe aunogona kugona gore rino. Ichakubatsira iwe kukwezva zvinotungamira, kuwana shanduko dziri nani, kuwedzera ruzivo, kutyaira kubatikana, uye kuwedzera mari.
Yakakwira mhando chigadzirwa mifananidzo
Kubatanidzwa kwemhando yepamusoro yezvigadzirwa zvemifananidzo, mavhidhiyo anorarama, mavhidhiyo ekuongorora zvigadzirwa, uye zvigadzirwa zvakagadzirwa nevashandisi ipapo ipapo zvinobata kutarisisa kwevashandisi uye zvinokochekera kwavo kwenguva refu bhizinesi rekuita.
Isu tese takaona izvi pane imwe nguva muhupenyu hwedu kana tichida kutenga chimwe chinhu chatinowana pane vezvenhau asi isu takanga tisingazive kuti tingaitsvake kupi.
Zvemabhizimusi zvemabhizimusi zvinorerutsa kwatiri nekubatanidza zvinokwezva zvinooneka zvezvigadzirwa nesarudzo yekutenga, zvichiita kuti hupenyu hwomutengi huve nyore uye hureruke.
Kubatanidzwa kwekutenga nzira
Nekukura kuri kuita vezvenhau muhupenyu hwevanhu uye nesarudzo yavo muhupenyu chaihwo, magariro mapuratifomu akawedzera kushambadzira nzira dzavo kuti dzive dzakanaka uye dzinonakidza.
Zvemukati izvo zvinogona kutengwa ndezve izvo zvinobva zvaunganidzwa kubva kumifananidzo uye mavhidhiyo anogadzirwa nemushandisi nezvigadzirwa, kuburikidza nema hashtag, ma tag uye kutaurwa kwe Instagram, Facebook neTwitter, iyo inobvumidza vashanyi kuti vatenge chigadzirwa zvakananga kubva kune zvakatumirwa.
Panzvimbo yekusimudzira zvigadzirwa kuburikidza nezviri mukati uyezve kuendesa iwo anofarira mapato kune peji yechigadzirwa kana webhusaiti. Ivo vanofanirwa kuitengesa iyo zvakananga kubva kune yekushambadzira zvemukati.
Izvi zvinochengetedza nguva, mari uye kushanda kune ese mabhizinesi nevatengi. Uyezve, iko kufamba mupaki kuita chero posvo inodhura kuburikidza nyore kushandisa uye kushandisa zvemagariro commerce maturusi.
Simudzira humbowo hwemagariro kuburikidza neGGC
Zvemagariro mushandirapamwe neUGC zvinowana makumi mashanu kubva muzana kubatikana, kunyanya kushambadzira kwechiratidzo kuburikidza neGG zvemukati zvinowana kanokwana ka50 kufarira uye kuita. Nekudaro, mumakore achangopfuura, mapuratifomu anga achishanda kubvisa kukakavara kwekutenga chigadzirwa kumwe kunhu mushure mekuzviwana pasocial media, achiwedzera mabhatani ekutenga uye mawallets edijithali.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Social Commerce inoitika muecommerce mu2020
Makorokoto pachinyorwa chikuru